बजाज स्क्र्याचमा विश्वकर्माले जिते १ लाख
धरान (अस) । बजाजको आधिकारिक विक्रेता अर्बिन एन्ड ब्रदर्श अटोले चाडवाडलाई लक्षित गरी धरानमा आयोजना गरेको एक्सचेन्ज मेलामा एक ग्राहकले १ लाख १ हजार रुपैयाँको स्क्र्याच कुपन जितेका छन् ।
धरान–८ स्थित सभागृहमा भइरहेको महामेलामा धरान–५ देवीगाउँका बुद्धिमान विश्वकर्माले भविष्यवाणी अफर अन्तर्गत मोटरसाइकल किन्नुअघि कुपन स्क्र्याच गर्दा १ लाख रुपैयाँ जितेका हुन् । उनले बजाज कम्पनीको १५० सीसीको मोटरसाइकल किनिसकेपछि पुनः कुपन स्क्र्याच गर्दा थप रू. १ हजार जिते । बजाजले विश्वकर्माले अहिलेसम्मकै ठूलो उपहार जितेको बताएको छ । उनले किनेको मोटरसाइकलको मूल्य २ लाख ६४ हजार ९०० रुपैयाँ पर्छ ।
भदौ २२ गतेदेखि शुरू भएको महामेलामा ४ दिनमा १७७ ओटा मोटरसाइकल विक्री भएको अटोका सञ्चालक अर्बिन तामाङले बताए । उनले चार दिनमा करीब २ करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार एक्सचेञ्ज अफरमा १२३ ओटा र क्यास फाइनान्समा ४० ओटा विक्री भएका छन् । थप दुई दिनसम्म चल्ने मेलामा बुकिङ पनि बढिरहेको उनले बताए । मेलाको करीब ७०० जनाले अवलोकन गरेका छन् ।
गत वैशाखमा आयोजित मेलामा ग्राहकको माग अत्यधिक रहेकोले अहिले एक्सचेन्ज मेला गरिएको बजाजको भनाइ छ । मेलामा भविष्यवाणी अफरअन्तर्गत नयाँ बाइक किन्नुअगाडि अधिकतम रू. १ लाखसम्मको छूट र किनिसकेपछि पनि रू. १ लाखसम्मकै छूट प्राप्त गर्न सकिनेछ । एक्सचेन्ज अफरमा मोटरसाइकलको न्यूनतम मूल्यांकन ३० हजार रुपैयाँ गरिनेछ । मूल्यांकन भएको रकममा रू. १५ हजार थप हुने बजाजले उल्लेख गरेको छ । नयाँ मोटरसाइकल किन्दा ठाउँको ठाउँ फाइनान्स तथा इन्स्योरेन्सको सुविधा समेत पाइने जानकारी बजाजले दिएको छ ।